ကျောက်စားပွဲ၊ ကျောက်ထွင်း၊ သင်္ချိုင်းခေါင်းကျောက် - ထိပ်တန်းအဖွဲ့အားလုံး
TOP ALL GROUP ကို ​​2006 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ TOP SCULPTURE LTD & TOP STONE CO.,LTD အပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံတွင် သဘာဝကျောက်များ အများဆုံးထုတ်လုပ်သည့် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
TOP ALL GROUP ကို ​​2006 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ TOP SCULPTURE LTD & TOP STONE CO.,LTD အပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံတွင် သဘာဝကျောက်များ အများဆုံးထုတ်လုပ်သည့် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များတွင် အထူးပြုသည်။Granite၊ Marble၊ Quartz၊ ကြမ်းခင်း၊ ရုပ်ပွားတော်များ၊ စမ်းရေတွင်းများ၊ ကော်လံများ၊ နစ်မြှုပ်များ၊ သင်္ချိုင်းကျောက်များ… ရှိသမျှ ကျောက်တုံးများ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒကို အမြဲလိုက်နာပါသည်- & "အရည်အသွေးနှင့် ခရက်ဒစ် ပထမ၊ Client Supreme"။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များက ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် နာမည်ကောင်းရခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားတွင်ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
TOP STONE သည် အကောင်းမွန်ဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်များကို အမြဲမပြတ် တည်ရှိနေပါသည်။
၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာ ဖောက်သည် အရင်းမှ တောင်းဆိုသော တင်းကြပ်မှု။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒကို အမြဲလိုက်နာပါသည်- "Quality & Credit First, Client Supreme"။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် သဘာဝကျောက်များ အများဆုံးထုတ်လုပ်သည့် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသော QC အဖွဲ့သည် ဖြတ်တောက်ခြင်းမှ အထုပ်တစ်ခုအထိ ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပါ။
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ 12 နှစ်အထက်
ခေတ်မီပုံစံ အစိမ်းရောင် စကျင်ကျောက်ဆေးကန် TASS-039
ခြင်္သေ့ TAMB-041 ပါသော အဝါရောင် စကျင်ကျောက်ခုံတန်းလျား
ကမ္ဘာ့မြေပုံနှင့် ကြယ်အမှတ်အသားပါရှိသော အနက်ရောင် Granite Ball...
Black Granite Sphere လက်နှစ်ဖက်လုံးရှိ ဖောင်တိန်တွင်...
Egg Plus White Marble Free Standing Bathtub TAB...
သဘာဝ အပြင်ဘက် ဂရန်းနိုက် ကျောက်အဝိုင်း ပန်းခြံ ရေဆေး...
လက်ဖြင့်ထွင်းထားသော အဝါရောင်ဥယျာဉ်ရေပန်း TAGF-21
နာမည်ကြီး စတိုင်လ် သဘာဝ အဖြူရောင် စကျင်ကျောက်ပွင့်အိုး...
ကျောက်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတနှင့် G...
ကြိတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကြိတ်ခွဲကိရိယာအဖြစ် ကြိတ်စက်ဖြင့် ကြိတ်စက်ပေါ်တွင် လှီးဖြတ်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ဤနည်းလမ်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- 1. မြင့်မားသော မာကျောမှုနှင့် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကြောင့် ...
Guangxi သည် ဆောက်လုပ်ရေးကို အပြီးသတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ...
2019 ခုနှစ်တွင်၊ Guangxi Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဆင့် (စာရင်းတွင် ပူးတွဲပါ) တွင် အစိမ်းရောင်မိုင်း အလုံး (၃၀) ကို အပြီးသတ်ဆောက်လုပ်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။သက်ဆိုင်ရာ သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သင့်သည်..။
Macheng သည် Hubei Univer နှင့် လက်တွဲမည်...
မေလ ၁၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြည်နယ်ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်း နည်းပညာသုတေသနဌာန၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်ဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို Macheng ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပရာ W...
Jiaohe မြူနီစီပယ်အတွင်းရေးမှူး Wang Rongxin...
မေလ ၉ ရက်နေ့တွင် မြူနီစပါယ်ပါတီ ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး Wang Rongxin သည် Tiangang Stone Industrial Park၊ Tiangang မြို့နှင့် Qingling မြို့များသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်း၊
4-401Unit၊ 1647#၊ Xing Lin Bay Road၊ Jimei ခရိုင်၊ Xiamen၊ China
ဖုန်း- +86-18030304532 (Wechat၊ WhatsApp၊ Viber)
Skype - ထိပ်တန်းပန်းပုများ